12/09/2021 - ALANZAYAR
ပြည်တွင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို အခမဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ့် သရုပ်ဆောင် မေတိုးခိုင်
12/09/2021 admin 0
ပြည်တွင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို အခမဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ့် သရုပ်ဆောင် မေတိုးခိုင် သရုပ်ဆောင် မေတိုးခိုင်ကတော့ တော်လှန်ရေးကြီးမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ တသားတည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး လမ်းထွက်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အားတက်သရော ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်ခြင်း ခံထားရပြီး ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခံထားရပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်း သရုပ်ဆောင်မေတိုးခိုင်က […]
ချစ်သူအကြောင်း ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ မင်းသား နေတိုး
ချစ်သူအကြောင်း ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ မင်းသား နေတိုး လက်ရှိမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိထားတဲ့ မင်းသားတစ်လက်ကတော့ နေတိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသရော၊ ဒရာမာပါ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အကယ်ဒမီဆုတွေကိုလည်း ဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် နေတိုးကတော့ လူပျိုကြီးဘဝကနေ ကျွတ်ဖို့ နီးစပ်လာလို့ လာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အိမ်ထောင်ပြုရမယ့်အရွယ်ထက် ကျော်နေပြီလို့ […]
ဖိနပ်တောင်မရှိဘဲ ပင်ပင်ပန်းပန်းလေ့ကျင့်နေကြတဲ့ CDF-Mara တပ်ဖွဲ့ထံကို မြန်မာငွေ (၅၅)သိန်းကျော်လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော်ဒေးဗစ်လှိုင်
ဖိနပ်တောင်မရှိဘဲ ပင်ပင်ပန်းပန်းလေ့ကျင့်နေကြတဲ့ CDF-Mara တပ်ဖွဲ့ထံကို မြန်မာငွေ (၅၅)သိန်းကျော်လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော်ဒေးဗစ်လှိုင် တောတောင်တွေထဲမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေကြတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ အခက်အခဲတွေမျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကတော့ အဆိုတော်ဒေးဗစ်လိုင်တစ်ယောက် တောတောင်တွေထဲမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေကြတဲ့ CDF-Mara တပ်ဖွဲ့ဆီကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ CDF-Mara တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ဖိနပ်တောင်မရှိဘဲ […]
ဖုန်းဘေ ထည့်ပေးခြင်း အကျိုးဆယ်ပါး…
ဖုန်းဘေ ထည့်ပေးခြင်း အကျိုးဆယ်ပါး… တခြားသူကို ဘေလ်ထည့်ပေးတဲ့အခါ ရရှိမယ့် ဘေလ်အကျိုး ဆယ်ပါးကတော့… ၁ ။ သွားရာနေရာတွင် ဖုန်းတာဝါတိုင်နှင့် နီးနေတက်ခြင်း ၂ ။ ဆယ်လီ ဖြစ်ပြီး ထင်ရှားကျော်ကြား လူသိများနိုင်ခြင်း ၃ ။ ဖေ့စ်ဘုတ် ပေါ်တွင် ဝန်းရံသူ မိတ်ဆွေ […]
မုံရွာမှာ အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီက အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတည်တံ့စေဖို့ ယတြာပြုလုပ်နေ
မုံရွာမှာ အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီက အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတည်တံ့စေဖို့ ယတြာပြုလုပ်နေ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ အလုံတပ်မြို့မှာ စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်တပ်က သူတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတည်တံ့စေရေးအတွက် ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က မန္တလေးကနေဘုရားဆင်းတု‌တော်တဆူပင့်ဆောင်ကာ ယတြာပြုလုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘုရားဆင်းတုကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ သယ်ယူပင့်ဆောင်လာတာဖြစ်သလို ကုန်းကြောင်းကလည်း စစ်ကားတန်းနဲ့ လာတာလည်းရှိတယ်လို့ တပ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းက […]
Mytelတာဝါတိုင်တွေဖျက်ဆီးလို့အင်တာနက်မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့သူတွေကိုပန်ဆယ်လိုဒဲ့ပြောပြီ MyTel တာဝါတွေထိတော့ MaALoe ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပြင် အသံထွက်လာတာက ဘောခိုးမလေးတွေပဲ။စစ်တပ်ကို လုပ်ပါလား…. တာဝါတွေထိရင် ပြည်သူတွေပဲ နစ်နာတာတဲ့။…. အင်တာနက်မရတော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့။ လာလာသေး… တာဝါတိုင်တွေက ပြည်သူပိုင်တဲ့။ ဘယ်လို ပြည်သူပိုင်တာလဲ နားမလည်လို့။ အံ့ဩပ။ အင်တာနက်မရတော့ရင်ဆိုတာလေး အရင်ပြောတာပေါ့။ MyTel မရရင် အခြားOperator […]
လူသက်စစ်ကောင်စီကိုအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းဘယ်သူ့မှဂရုမစိုက်ကြောင်းပြောလာတဲ့ ဒိန်းဒေါင်(ရုပ်သံ)…. ဒိန်းဒေါင်လူသတ်စစ်ကောင်စီကိုသာအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းပြောပြီးလိုင်းပေါ်ကပျောက်သွားခဲ့ပြီးနောက်ပရိသတ်ကြီးရေဟာသလူရွှင်တော်ဒိန်းဒေါင်တစ်ယောက်ကတော့ ပရဟိတတွေ လုပ်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့လေးစားအားကျမှုကို ရထားသူပါနော်။…. ဟာသလူရွှင်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒိန်းဒေါင်ကတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်လည်း လူအများလုပ်နေကြတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ဝင်မပါဘဲ ငြိမ်နေသူတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးပါပဲနော်။… အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှဒိန်းဒေါင်ကစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားပွဲတွေမှာတတ်ရောက်ခဲ့ပြည်သူတွေကဖယ်ကြဉ်ခြင်းခံထားရသူတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။…. ဒါကြောင့်မလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခြင်းခံရပြီး ဒိန်းဒေါင်ကတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။…. လူမှုကွန်ယက်တွင် တက်လာတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ် လောက်ကောင် […]
“ငါတို့ဟာ..ကြွေမယ်ဆိုရင်တောင် ပြည်သူတွေအတွက် အတောက်ပဆုံး လင်းလက်ပြီးမှ ကြွေကျသွားမယ်”တဲ့ဗျာ
“ငါတို့ဟာ..ကြွေမယ်ဆိုရင်တောင် ပြည်သူတွေအတွက် အတောက်ပဆုံး လင်းလက်ပြီးမှ ကြွေကျသွားမယ်”တဲ့ဗျာ အကယ်၍ မီးမစိမ်းခဲ့တော့ရင် အမြဲ သတိရပေးကြပါ.. ငါတို့ဟာ..ကြွေမယ်ဆိုရင်တောင် ပြည်သူတွေအတွက် အတောက်ပဆုံး လင်းလက်ပြီးမှ ကြွေကျသွားမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပေးပါ. နှုတ်မဆက်ပဲ ထွက်သွားတဲ့အခါ မငိုပါနဲ့။ အချိန်မရွေး သေနိုင်တာမို့။ ကိုယ်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ Active now account လေးကလည်း […]
နောက်ဆုံးရာဇသံပေးလိုက်တဲ့ ဒေါက်တာဆာဆာ….. ဒေါက်တာဆာဆာမှာ့ ပြည်သူများသို့ ပြောကြားလိုက်ပြီ….. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို…. နောက်ဆုံးရာဇသံပေးလိုက်တဲ့ ဒေါက်တာဆာဆာ…. ဒေါက်တာဆာဆာမှာ့ ပြည်သူများသို့ ပြောကြားလိုက်ပြီ….. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို…. နောက်ဆုံးရာဇသံပေးလိုက်တဲ့ ဒေါက်တာဆာဆာ… ဒေါက်တာဆာဆာမှာ့ ပြည်သူများသို့ ပြောကြားလိုက်ပြီ….. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို….. နောက်ဆုံးရာဇသံပေးလိုက်တဲ့ ဒေါက်တာဆာဆာ…. ဒေါက်တာဆာဆာမှာ့ ပြည်သူများသို့ […]
အမေရိကန်ကြေညာလိုက်ပြီ….. ပြည်သူတွေအတွက် အထူးသတင်းကောင်းကြီးကို ပြောပြလိုက်ပြီ…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို…. အမေရိကန်ကြေညာလိုက်ပြီ…. ပြည်သူတွေအတွက် အထူးသတင်းကောင်းကြီးကို ပြောပြလိုက်ပြီ…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို…. အမေရိကန်ကြေညာလိုက်ပြီ…. ပြည်သူတွေအတွက် အထူးသတင်းကောင်းကြီးကို ပြောပြလိုက်ပြီ…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို….. အမေရိကန်ကြေညာလိုက်ပြီ…. ပြည်သူတွေအတွက် အထူးသတင်းကောင်းကြီးကို ပြောပြလိုက်ပြီ…. […]